Kuthetha ukuthini ukwanga ngamandla endodeni | Amadoda aneSitayile
Ukwanga yimvakalelo ye ukwabelana ngeemvakalelo kwaye loo mbono yenza wonke umntu athande uvelwano ukuze ukwazi ukuwola kakhulu. Inokunikelwa ngezizathu ezininzi, ukusuka kumbuliso olula, uhlobo oluthile lombhiyozo, okanye ngenxa yovuyo lokubona umntu. Kodwa kuthetha ukuthini ukwanga okunamandla kwendoda?
I-Hugs mihle kwaye inentsingiselo kakhulu. Ngokubanzi, isenzo sokuwola luphawu lothando lweemvakalelo, inkxaso kunye nokukhuselwa, nangona kuya kuba yimfuneko ukuhlalutya xa indoda ikugona, ngawaphi na umzuzu kwaye ngamandla kangakanani.
1 Siziva njani xa sifumana ihug
2 Ithetha ukuthini xa indoda ikugona?
3 Ithetha ukuthini xa indoda ikubamba iqinisa?
4 Xa indoda ikugona esinqeni
5 Xa indoda ikuwola emva kokulalana
6 Xa ekugona silele
Siziva njani xa sifumana ihug
Enoba siyawola okanye siyawangana, eso senzo kudala intlalontle eninzi phakathi kwamaqela omabini. Sisenzo esikhupha i-serotonin eninzi kunye ne-dopamine, isenza sizive simnandi kakhulu, nokuba asiyikholelwa. Kungcono ukwanga umntu onomdla kakhulu kwaye asamkele ngezandla ezishushu. Emva koko siya kuziva unamandla ngakumbi kwaye unomoya.
Ithetha ukuthini xa indoda ikugona?
Wanga naye ichasene neziphumo ezibi kwaye umntu uyakwazi ukukhupha uloyiko, ukudala ukhuseleko ngakumbi, ukwenza inzondo kunye nosizi zihambe kwaye shiya ngasemva ixesha lomsindo. Okomzuzwana ezinye iibhloko zomzimba kunye neemvakalelo ziyalungiswa, ngoko isenzo sakho sidala izibonelelo ezininzi.
Indoda xa imanga kwaye iyenza rhoqo ithetha ukuba ubudlelwane phakathi kwezi zibini bukhula. Ukuba kukho into engaphezu kobuhlobo obulula bunokukhula ngengqiqo gcina uhlobo oluthile lobudlelwane. Xa bebanga kuba beziva bekhululekile, ufuna ukuba ngamaqabane kwaye ugcine ubuhlobo ixesha elide.
Ukuba loo ndoda ivakalelwa ngaphezu kobuhlobo indlela yakhe yokuwola ishushu ngakumbi. Ngelixa ungayenza ngamandla, uya kuyenza kakuhle kwaye rhoqo. Ungamangala nge hug ethambileyo esinqeni nasemva.
Uxelela njani ukuba indoda iyakuthanda
Ithetha ukuthini xa indoda ikubamba iqinisa?
Indoda enomdla uyathanda ukwanga ngamandla. Umdla unokubandakanya imiba enje uthando, ububele kunye nothando olukhulu. Banokuba ziihugs ezinikwa ngeprothokholi elula, kodwa zama ukujonga ukuba zeziphi ezinye iimpawu ezikufutshane. Indoda esemathandweni iyakubamba ikuqinise kuba uziva ukuba inkanuko enkulu. Oku kuthetha ukuba abafuni kukuyeka uhambe kwaye isenzo esilula sokwenza njalo kungenxa yokuba ukubambezele.
Ukuba ezo hugs zisondele kwaye uyaqala hambisa iingalo zakho kunye nezandla phantsi ngasemva, ukuphulula phezulu naphantsi, ngoko kungenxa yokuba ukukhathalele kwaye ukukhumbule kakhulu. Ukuziva kwakhe engqondweni yindlela obaluleke ngayo ebomini bakhe kwaye uyoyika ukuphulukana nawe.
Xa indoda ikugona esinqeni
Luphawu lokuthantamisa xa indoda ukubamba okanye ukuwola esinqeni sakho. Njengomgaqo jikelele, isibakala sokuyenza kungenxa yokuba uziva enqwenela wena. Xa ekwenza ngokubamba esinqeni akuwole ngasemva, kungenxa yokuba uzive uthando oluninziUkuba naye ubeka intloko yakhe egxalabeni lakho, kungenxa yokuba uziva enentembelo enkulu kuloo mntu.
Hambani nibambene ngesandla phantsi estratweni Ukuhamba sisenzo sothando, ukuba nako kukwenza ubambe esinqeni kunokuba kukucenga kakhulu. Asifuni ukuba nethemba malunga nale nkcukacha, kodwa ngokutsho kwezinye iingcali zengqondo, inyani yokubamba iqabane esinqeni ngelixa uhamba umqondiso wokuba nomona nokuba nezinto.
Xa indoda ikuwola emva kokulalana
Emva kokwabelana ngesondo kunokuba sisiphelo. Kodwa ukuba indoda iyakugona, ikuphulule, ithethe nawe kwaye ikuphuze, kungenxa yokuba akafuni ukuba loo mzuzu uphele. Ngokwenene banothando oluninzi kwaye babonisa ukuzinikela.
Xa ekugona silele
Esi senzo yinto esinqwenela ukuba nayo yonke imihla xa sisemathandweni. Xa indoda ilele nomntu iyamgona ubusuku bonke Ubonisa uthando oluninzi kunye nokuzinikela. Ukuba sele nisisibini, nihamba kubudlelwane obugqwesileyo ekufuneka nibelane ngabo ubomi benu bonke.
Ukuqukumbela, xa indoda ikuwola ingabonisa iimvakalelo ezininzi kwaye ize vusa iimvakalelo ezifihlakeleyo. Xa besenza kuba bonwabe kakhuluInokuba kukubhiyozela into ethile, isiganeko ngaphandle kokungaphezulu okanye kuba ndandiyidinga ngokwenene ikhulu leepesenti.
Kwezinye iimeko Ndisenokuba buhlungu kwaye kufuneka uthuthuzelwe ngumntu omthembileyo. I-hug yakho iya kukwenza uzive ngcono kakhulu kunye ne-serotonin oyifihlayo iyawuphakamisa umoya wakho. I-Oxytocin kunye ne-dopamine nazo ziyinxalenye yokukwazi ukuziva intlalontle ngakumbi kunye nentuthuzelo.
Abakwanga babulela kakhuluUkuba ziyenzeka, kungenxa yokuba uziva enemincili ngoko wamxelela kona ngenye imini okanye into athanda ukuba yiyo ecaleni kwakho. Ukwenza oko kukunika loo mbulelo ngokuba nayo umntu obalulekileyo ecaleni kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Kuthetha ukuthini ukwanga ngamandla endodeni
Uyenza njani intombi ukuba ithandane noWhatsApp